250 Andro Tsy Nahitàna Ireo Mpianatra Ayotzinapa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jona 2015 2:54 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, বাংলা, русский, Français, Español
250 andro izay no lasa hatramin'ny nanjavonan'ireo mpianatra Ayotzinapa any Meksika. Mbola tsy hita ihany ny rariny.
3 Jona 2015, manamarika ny 250 andro hatramin'ny nitrangan'ilay loza anisan'ny lehibe indrindra tamin'ny tantara maoderin'i Meksika: ny fanjavonana sy ny famonoana tany Iguala ireo mpianatra miisa 43, avy amin'ny Sekoly Fianarana any Ambanivohitr'i Raúl Isidro Burgos any Ayotzinapa, ao amin'ny fanjakan'i Guerrero.
Na teo aza ny fotoana lasa, mbola misy hatrany ireo antso hitànana ireo mpiasam-panjakana ho tompon'andraikitra tamin'ny zavatra nanjo ireo mpianatra. Naneho hevitra ireo manampahaizana, Imanol Ordorika sy Adolfo Gilly:
Heloky ny fanjakana, natao tao amin'ny firenena izay lasa mandeha ho azy ny fampijaliana, fanjavonana an-terisetra, ary ny fahafatesana feno herisetra, ilay fanjavonana sy famonoana ireo mpianatra tany Iguala, Guerrero ireo. Voamarina ny famonoana mpianatra miisa telo sy olon-tsotra miisa efatra, ary koa ny fanjavonana an-terisera nanjo ireo mpianatra miisa 43 avy amin'ny Sekoly Fampianarana any Ambanivohitra ao Ayotzinapa.
Ireo tanora mpianatra no lasibatra, izay tao anatin'ny fahantrana sy fiaretana ny mafy teo anivon'ireo fianakaviany, niady niaro ny fanabeazana ny vahoaka, teo ambany fepetra henjana tao amin'ny Sekoly Fampianarana any Ambanivohitra. Nanao antsojay ireo olona ireo nandritra ny am-polo taonany maro ny governemantam-panjakana sy federaly.
Nanely ny fiampangàna ny fandraisan'anjaran'ireo mpiasam-panjakana tamin'io loza tany Ayotzynapa io ny Fikambanana Tsy Miankina Amin'ny Fanjakana Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Olom-pirenena Manohana ny Zon'olombelona):
Samy nandray anjara tamin'ireo zava-niseho, na ny pôlisy teo an-toerana avy ao Iguala, Guerrero, na ireo olona nanao fanamian'olon-tsotra, teo anatrehan'ny “fahanginana, tsy fihetsehana ary fiaikena ny zava-nitranga tanteraka” nataon'ireo miaramila federaly, mpiasan'ny fonja, ary ireo milisy mitam-basy, izay efa fanta-bahoaka tsara ny fisian'izy ireo any amin'ny fanjakan'i Guerrero, noho ilay hetsika “Guerrero Mandry fahalemana”.
Nitondra tamin'ny fisamborana ny ben'ny tanànan'i Iguala sy ny vadiny, José Luis Abarca sy María de los Ángeles Pineda, fantatra kokoa amin'ny hoe “Mpivady Mpanjaka” noho ny fomba fiainany milomano anaty harena, ireo fanadihadiana nataon'ny biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana tamin'ny volana Novambra 2014. Nampangaina ho nanome ny baiko famonoana izy roa, fa nijanona tsy nihetsika hatreo ny fizotry ny fanenjehana ny heloka mikasika ireo mpamono manokana. Izany hoe, nolazaina ho meloka taminà heloka hafa maro ihany koa ireo mpivady, tafiditra amin'izany ny fandraisana anjara tamin'ny fikambanan-jiolahy.
Nandritra ilay fanadihadiana, nandray anjara fototra tamin'ny fizahàna ireo sisa tsy may hita tao anaty fitoeram-pako teo akaikin'i Iguala ny ekipa Arzantina misahana ny fanadihadiana momba ny olona amin'ny lafiny manontolo sy araka ny lalàna.
Jesús Murillo Karam, izay mitantana ny biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana sy ny fanadihadiany, dia nosoloina an'ilay mpikambana teo aloha tao amin'ny Kongresy, Arely Gómez, izay voatsikera ho kely traikefa amin'ny resaka heloka bevava, fa manana traikefa lehibe kosa eo amin'ny tantara politika. Nilaza izao i Gómez taorian'ny nandraisany ny toerana:
Resy lahatra aho fa natao ifotony tsara, tamim-pahamatorana ary feno tsara ny fanadihadiana nataon'ny Lehiben'ny Fampanoavana teo aloha, Murillo Karam. Nataon'ireo mpikambana fanta-daza maro tao amin'ny biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana io.
Mbola misy fihetsiketsehana sy fitokonana matetika ho fahatsiarovana ireo tranga nahatsiravina tany Iguala. Ny 26 May, natao tao amin'ny Tanànan'i Meksika ny fifamorian'ny “Hetsika Maneran-tany ho an'i Ayotzinapa”, ary nanatrika teo ny fiankavian'ireo tsy hita popoka maro.
Naneho hevitra toy izao tao amin'ny Twitter i Enrique D.:
Ireo voninkazom-pahatsiarovana mamafy ireo voan'ny fahalalahana. Tsy afaka ny hanadino i Meksika—ataovy misotro amin'ny loharanon'ny fahatsiarovana izy.
Ny Alahady (7 Jona) lasa teo, nandeha nandrotsa-bato tamin'ny fifidianana antenantenam-potoana ireo Meksikana, mba hifidy ireo mpitondra teo an-toerana sy ireo mpitondra fanjakàna. Ho an'ny sasany, io no fanararaotana lehibe hanehoan'izy ireo ny tsy fahafaliany amin'ny fanjakana ankehitriny.
Nanoratra toy izao i Compa Elephanthorn, mpampiasa Twitter:
Raha mifidy ho an'ny PRI [Antoko Revôlisiôneran'ny Andrim-panjakana] ianao, tsarovy tsara fa mety ho ny zanakao lahy na ny olon-tianao no olona hanjavona manaraka eo.
(Mpikambana ao amin'ny PRI ny Filoham-pirenena Enrique Peña, ary nanao fampielezankevitra ho an'io antoko io ilay Lehiben'ny Fampanoavana vaovao, Gómez, raha nanao ny firotsahany ho loholona izy.)
Ny kandidàn'ny PRI, Esteban Albarrán, no lasa ben'ny tànanan'i Iguala tamin'ny fifidianana ny faran'ny herinandro lasa teo iny, nandresy ny Antokon'ny Revôlisiôna Demôkratika, izay tao anatin'ny mpikambana aminy ny ben'ny tanàna teo aloha (any am-ponja ankehitriny) sy ny governoran'i Guerrero teo aloha, izay nalàna tamin'ny toerany taorian'ilay zava-doza nitranga tao Ayotzinapa.
Manao antso isan'andro ny anaran'ireo mpianatra tsy hita rehetra i Epigmenio Ibarra, izay manana mpanjohy miisa maherin'ny 229.000 ao amin'ny Twitter. Manisy hafatra politika miaraka amin'ireo bitsika ireo i Ibarra.
1 Abel. Miaraka ho an'ny Rariny sy ny Marina ho an'i Ayotzinapa. Miaraka ho an'ny Rariny ho an'ny ABC. Tsy manadino isika ary tsy mamela heloka. Ny Fanjakana no nanao io.
Raha tia hijery tatitra bebe kokoa ireo tatitry ny Global Voices momba io tantara io, jereo ny pejinay fandrakofana manokana azy io.